Mahad salaad oo Qarixii muqdisho ku tilmaamay mid si weyn loo soo agaasimay – Radio Daljir
Mahad salaad oo Qarixii muqdisho ku tilmaamay mid si weyn loo soo agaasimay
Luulyo 25, 2019 6:40 g 0
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay in qaraxii shalay ka dhacday Gobolka Banaadir uu ahaa musiibo qaran, isagoo xusay Al-Shabaab shirko lagula ahaa dhibaatadaas ka dhacday Xarunta Gobolka Banaadir.
Qoraal uu bartiisa Facebook ku soo qoray ayuu sheegay in dhowr iyo toban ruux oo isugu jira Guddoomiyeyaal degmo, Agaasimayaal iyo dhalinyaro amniga u qaabilsan Guddoomiyaha.
“Amniga xarunta Gobolka Banaadir marka aan qiimeyno, waxaa loo ogolyahay in baaritaan la’aan iyaga iyo gaadiidkooda ay soo galaan Gudoomiyaha Gobolka iyo ku xigeenadiisa, Gudoomiyeyaalka degmooyinka iyo agaasimeyaalkana baabuurta banaanka ayaa looga soo reebaa afar barood oo kala duwan ayaana lagu soo baaraa, markaas kadib ayayna soo geli karaan gudaha hoolka shirarka ee shalay lagu qarxiyay”ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad.
Waxaa uu sheegay in musiibadii shalay dhacday aanay jirin illaa iyo hada dad loo soo qabtay, qof isku casilay iyo qof xilka looga qaaday midna, waxaana uu is weydiiyay sababta meel amnigeeda sidaas loo adkeeyay in sababta qof araga la’ ugu suura gasho inuu qarax keeno.
“Masiibadii shalay dhacday ilaa hada majirto qof loo soo qabtay, qof isku casilay iyo qof xilka looga qaaday midna, marka laga reebo sheeko suuqa lasoo geliyay oo la leeyahay qofka isqarxiyay waa gabadha Agaasimaha Waaxda Naafada Gobolka Banaadir. Lkn waxaa isweydiin mudan meel amnigeeda sidaas loo adkeeyay oo kuwii lixaadka qabay ay ku adagtahay in ay soo maraan sidee qof indha la’ ugu suuragashay in uu qarax keeno. Sidoo kale gabadhaan mudo dhowr sano ah ah ayay joogtay gobolka, waxayna goob joog u ahayd munaasabado kuwaan ka waaweyn oo madaxda dalka ugu saraysa iyo kuwa ajnabi ahba ay joogeen laguna qabtay xarunta gobolka, marka maxay isugu qarxin waysay”ayuu is weydiiyay Xildhibaan Mahad Salaad.